Yenza usuku lwakho usuku lube lula ngaba baphathi bemisebenzi emi-2 yasimahla | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Nokuba usebenza kwiqela njengomzobo kunye / okanye uyilo lwewebhu, okanye ukuba uyenza wedwa, kuya kubakho iintsuku apho ungazukufumana sithuba simahla kwindawo yakho yokusebenza ukuze uncamathisele enye emva kwayo. Ungathanda ukuhombisa istudiyo sakho esinamaphepha amaninzi emthubi, kodwa sicebisa ukuba ujonge izixhobo esizilapha namhlanje. Mhlawumbi uthatha isigqibo sokunciphisa inani lamaphepha kwaye kufuneka ube nawo imisebenzi yakho icace gca.
Los abaphathi bomsebenzi ziinkqubo okanye izicelo ezisivumela ukuba sihlele kwaye si-odole imisebenzi yethu phantsi kweendlela ezahlukeneyo, ezinje ngokubaluleka ngenxa yongxamiseko kumhla wokuhanjiswa, ixesha lokuqhubekeka, njl. Eyona nto ibalaseleyo kuko konke kukuba sabelane ngemisebenzi yethu nabanye abantu, abakwiqela elinye lomsebenzi, ukuze bakwazi ukuseka nokwabela imisebenzi, ukugqabaza, ukwabelana, ukwenza igalelo ... indlela elungileyo yokwenza ube neqela elikhuthazayo, ejolise kwinjongo enye, ukubheqa ndawonye ukufezekisa into ebonakalayo: ukusebenza kakuhle.
1 Abaphathi bemisebenzi yasimahla
Abaphathi bemisebenzi yasimahla
Namhlanje sikuzisa ukhetho olufutshane lwabaphathi bemisebenzi yasimahla leyo banokukunceda ngemini yakho imihla ngemihla. Zininzi ezinye, kunjalo. Ungachwetheza kuGoogle kwaye ukhangele ezinye izisombululo, kodwa sicinga ukuba ezi ziya kukuqinisekisa.
Ngokwam, bendimthanda kakhulu lo mphathi womsebenzi. Kunokuthiwa ijolise kwabo bantu bathanda hamba ngokukhawuleza Ngonxibelelwano lwayo nayiphi na inkqubo, engakhathazeki ngokufunda iindlela ezimfutshane zekhibhodi ukuhamba ngokulula. Iyasebenza ibhrawuza yewebhu, unokuyisebenzisa kwi nayiphi na inkqubo yokusebenza, naphi na ngaphandle kokukhuphela nantoni na kwikhompyuter yakho.
Eli nqaku, elinokuthi kwabaninzi linokucaphukisa, alindikhathazi konke konke. Kodwa gcinani engqondweni ukuba sixhomekeke kufikelelo kwi-Intanethi ukungena.
Kwa-Asana kunjalo Kulula kakhulu ukuqala ukusebenza. Ngenisa ngokulula iwebhu, faka i-imeyile yakho (ukubhalisa) kwaye wamkele i-imeyile yokuqinisekisa eya kuthi ifike ngeposi. Ndimele nditsho ukuba ndichukumisekile sisantya eyafika ngaso i-imeyile (hayi umzuzu).
Nje ukuba ungene kwikhonkco eliziswa yi-imeyile, kuya kufuneka ulandele amanyathelo abonisiweyo (igama lakho, ifoto, amanye amalungu eqela kunye nee-imeyile kunye negama leqela).
Xa ufaka iScreen sakho soMphathi weMisebenzi, yonke into inomdla kakhulu kwaye ayibonisi ngxaki ukuba uqhelane nayo.
Into ehlekisayo kukuba ukusebenzisana phakathi kwamalungu eqela kunjalo ngexesha lokwenyani. Oko kukuthi: uyakubona ngexesha lokwenyani into eyenziwa ngumntu ngamnye (ukwenza umsebenzi omtsha, ukumnika ulwazi ...).
Ukuba ndiyamthanda uAsana ngenxa yesakhono sokuskrolela ujongano lwayo kunye neendlela ezimfutshane zekhibhodi, iWunderlist yile nto iyenzayo ukuze ndibukeke ndigqibelele. A uyilo eyahlukileyo kweyangaphambili, ngoku yangoku, kunye nepateni yokulinganisa ukhuni eyenza ifudumale kwaye ibe mnandi. KwiWunderlist akunakwenzeka ukuba ukujonga kwethu kuphazamiseke, kuba ijolise ngqo ngasefestileni ngasekhohlo nakwindawo ephambili yokusebenza (apho siza kubhala khona imisebenzi yethu). Kwikholamu engasekhohlo siya kube silungiselele amacandelo ahlukeneyo apho kufuneka sikwenze ikhathalogu yemisebenzi yethu. Into entle kakhulu kukunikezela abasebenzisi abaliqela kuluhlu olwahlukeneyo: ungabelana ngoludwe kunye noMiguel noJuan, kunye noluhlu lweemovie zokubukela kunye noSandra noLaura. Umzekelo.
Amagama oluhlu anokutshintshwa. Jonga i icon ye-nut kwakulo kholamu inye, ebekwe kwindawo esezantsi ekunene, kuba kulapho unokufikelela kwiiNketho kwaye uguqule iiparameter ezinje ngolwimi olungagqibekanga kwescreen sakho (phakathi kwezinye izinto ezininzi).
NjengoAsana, isebenza kwisikhangeli sethu sewebhu kwaye indlela yokuyifumana iyafana (kuya kufuneka ubhalise ukuqala).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » 2 abaphathi bemisebenzi yasimahla eya kwenza ukuba usuku lwakho lube lula